Muxuu Gaas xilka uga qaaday madaxdii Amniga? - BBC News Somali
Muxuu Gaas xilka uga qaaday madaxdii Amniga?
Image caption C/weli Gaas
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed cali Gaas ayaa wareegto wuxuu xilalkii kaga qaaday madaxii hay'adda sirdoonka PIA C/risaaq Ciise Xuseen (Khaatumo), iyo Madaxii hay'adda amniga PSS C/laahi Aadan Maxamed (C/laalhi Ulle).
Wareegtada uu xilka kaga qaaday madaxweyne Gaas labadaas mas'uul laguma sheegin sababta xil ka qaadista, Sidoo kalena lama sheegin cidda loo magacaabay.
Haddaba, maxay tahay sababta keentay xil ka qaadista labadaas mas'uul?
1. Arrinta ugu weyn, ee lala xiriirinayo ayaa loo badinayaa weerar ay dhawaan Al Shabaab ku qaadeen deegaanka Balli Khadar oo ku yaalla buuraleyda Galgala, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland.
2. Qodobka labaad ee mas'uuliyiintaas xilka looga xayuubiyey ayey dadka wax indha indheeya la xiriiriyeen dagaalka Tukaraq ka socda oo weli aysan wax guul ah ka gaarin Puntland. Somaliland iyo Puntland dhowr goor oo hore ayey ku dagaallameen deegaankaas oo qabsashadiisa muhiim u ah Puntland si ay gacanta ugu dhigto Magaalada Laas Caanood oo ay Somaliland ka taliso. Isku dayadaas oo aan u suurto galin Puntland.
3. Qodobka 3aad oo muhiimadiisu ka yara ladifan tahay labada hore ayaa loo arkaa amniga gudaha Puntland oo meelaha qaar aan wanaagsanayn. Bisha Ramadan gudaheeda , xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Puntland ayaa lagu dilay Gaalkacyo, dilkaas oo u muuqda inuu ahaa mid abaabulan, lagana hortagi karay.
Puntland oo ka digtay argagixisada
Qodobbadaas ayey dadka wax indha indheeya u badinayaan inay saamayn ku leeyihiin xil ka qaadista madaxdaas, oo iyaga qudhooda aan wax badan kala socon sababta xilka looga qaaday, isuna haysta inay hawl badan oo wanaagsan qabteen.
Waxaa kale oo xil ka qaadistan ay timid ayadoo lix bilood ay ka dhiman tahay xilliga la qaban doono doorashada madaxtinimada Puntland.
Dhinac kale marka laga fiiriyana, dadka wax indha indheeya oo BBC u warramay meesha kama aysan saarin shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka ay dhawaan ku yeesheen baydhabo, kaasoo lagu guddoonsaday in lacago badan loo qoondeeyo amniga iyo la dagaallanka Al Shabaab. Xil ka qaadistanna waxay u muuqanaysaa in ay tahay mid uu Madaxweyne Gaas ugu tabaabusheysanayo fulinta qorshahaas.